Iran oo qabatay dooni kaluumaysi oo Sucuudiga laga leeyahay - BBC News Somali
Khariidad muujinaysa Sucuudiga, Iran iyo dalalkay deriska yidhiin
Iyadoo xidhiidhka labada dal u dhexeeyaa haatan cakiranyahay, ayaa wakaaladda wararka Iran waxay sheegtay in ciidanka ilaalada kacaanku qabteen dooni kaluumaysi oo Sucuudiga laga leeyahay shaqaalihii saarnaana ay xidheen.
Shaqaalaha saarraa doonidu waa shan qof oo Hindi ah waxaana la qabtay doonidooda ka dib markii ay galeen badda Iran sida uu sheegay Ardashir Yar Axmadi oo ah af-hayeenka rasmiga ah ee wakaaladda kaluumaysiga ee gobolka Buushahar ee Iran.
Waxaanu Yar Axmedi yidhi waa markii labaad ee muddo bil ah gudaheed la qabto dooni laga leeyahay Sucuudiga.
Waxaa xusid mudan in xidhiidhka Sucuudiga iyo Iran marayo halkii ugu xumayd muddo sanado ah, waxaanu mid ba ka kale ku eedeeyaa inuu khalkhal gelinayo nabadgelyada gobolka.
Sucuudiga iyo dawlado kale oo Carbeed ayaa xidhiidhka u jaray Qatar oo arimaha ay ku eedeeyeenna ay ka mid tahay in ay xidhiidh fiican la leedahay Iran.
Warbaahinta Iran ayaa bishii hore sheegtay in ciidanka ilaalada xeebaha Sucuudigu ay rasaas ku fureen dooni kaluumaysi oo Iran laga leeyahay oo uu halkaa ku dhintay mid ka mid ah kaluumaysatadii doonida saarnaa saddex kalena ay xidheen.
Sucuudiga ayaa Iran ka dalbaday in ay sii dayso kaluumaysatadaa la xidhay waxaannu sheegay in ay hastaan ruqsad kaluumaysi oo rasmi ah laakiin ay badda ku deyoobeen.
Wasaaradda warfaafinta ee Sucuudiga ayaa iyadna sheegtay in ciidamada ilaalada xeebaha Sucuudigu qabteen saxiimad ay saarraayeen saddex xubnood oo ka tirsan ciidanka ilaalada kacaanka Iran.
Warbixin: Shiinaha awooddiisa Niyukilarka ayuu ballaarinaya